Sida loogu isticmaalo taleefannada casriga ah xakamaynta Nintendo Switch | Androidsis
Sida loogu isticmaalo taleefankaaga casriga ah xakamaynta Nintendo Switch
Nintendo Switch waa qalabka ugu dambeeya ee ay soo bandhigto Nintendo qiyaastii saddex sano ka hor. Konsolku wuxuu mar kale ahaa sharad weyn oo shirkadda Japan ah, oo ku sii socota inay ku sharraxdo cinwaannada guryaha laga soo galo, laakiin iyadoon lumin indhaha cinwaannada kale ee ku arkay iftiinka labada madal ee kale.
Raaxada JoyCon waxay kuu oggolaaneysaa inaad nooc walba ku cufto qunsulka, in kasta oo ay sidoo kale jirto suurtagalnimada helitaanka maamule Pro si sax ah ugu habboon cinwaannada qaarkood. Laakiin iyagu maahan fursadaha kaliya, tan iyo markii aad isticmaali karto casriga casriga ah ee 'Android' si aad ugu ciyaarto, oo dhan iyada oo loo marayo hal app.
JoyCon Droid waxaa loo sameeyay si loo matalo JoyCon iyo kantaroolaha Pro, isticmaaluhu wuu dooran karaa mid kasta oo ka mid ah haddii uu doonayo suuf wakhti kasta. Isku xirnaanta taleefanka ee qalabka ayaa lagu sameyn doonaa xiriirka Bluetooth, dhammaantood si fudud oo fudud.
1 JoyCon Droid waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo kantaroole labaad
2 Sida loogu xiro taleefanka JoyCon Droid nalka Nintendo
JoyCon Droid waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo kantaroole labaad
Haddii aad rabto inaad la ciyaarto ciyaartoy badan, barnaamijka JoyCon Droid waa xal deg deg ah sidaa darteed uma baahnid inaad iibsato JoyCon kale ama amar. Waxay ku shaqeysaa qaab sax ah inkasta oo ay ku jirto nooca Alpha, waxaad sidoo kale dooran kartaa haddii aad rabto inaad isticmaasho bidix ama midig JoyCon, sidoo kale Maamulaha Pro.
Dejinta badhanka ayaa ah wax kale oo aad ku hagaajin karto Badhanka Khariidadaha, Doorashadani waxay ku dhex jirtaa goobaha, si aad u dhigto badhanka ficilka halka aad doorbideyso. Waxyaabaha wanaagsan waa in la awoodo in la isticmaalo iskutallaabta ama ulaha analogga ah, labaduba waa muhiim marka laga hadlayo dhaqaajinta dabeecad, gaari, iwm.
Sida loogu xiro taleefanka JoyCon Droid nalka Nintendo
Waxa ugu muhiimsan waa inaad kala soo baxdo barnaamijka 'JoyCon Droid' Dukaanka 'Play Store', culeyskiisu waa ilaa 7 megabyte waxaana lagu soo dejiyaa qiyaastii hal daqiiqo. Markaad soo dejiso, sii wad inaad rakibto. In kasta oo xaqiiqda ah in liistadu ku qoran tahay Ingiriis, way iska fudud tahay. Si aad isugu xirto samee waxyaabaha soo socda:
JoyCon Droid (Wuxuu ubaahan yahay xidid & Magisk)
Developer: Shaybaarka DeepBlue
Fur barnaamijka JoyCon Droid, taleefanka ayaa ku weydiin doona rukhsad aad ku dhejiso Bluetooth-ka, marka tan la sameeyo dhagsii OK
Xulo kontoroolka aad rabto inaad jilistaan, JoyCon bidix ama midig ama kantaroolka Pro
Guji Goor dambe waxayna ku tusi doontaa iskuxiraha xakamaynta in aad dooratay
Hadda ku beddelashada 'Nintendo Switch' ee goobaha waxaad ka doorataa "Xakamaynta" ikhtiyaarka, kan afraadna wuxuu ka bilaabmaa bidix oo sug dhawr ilbiriqsi oo ah xulashooyinka ku habboon ee lagu rakibo
Hadda waxay ku tusi doontaa dhowr fursadood, dooro "Beddel amarka ama qaabka dhejinta"
Hadda, markaad fulisay dhammaan tallaabooyinka, taleefanka ayaa ku tusaya inaad ku lammaanantahay qunsulka, aqbal oo wax walbana diyaar bay u noqon doonaan adeegsi.
On Console Switch Nintendo waxay hadda muujineysaa in taleefanka uu shaqeynayo Amar ahaan, hadda waxaad awoodi doontaa inaad wax walba ku xakameyso taleefankaaga: Ku gal is-dhexgalka, ku dhaji mid ka mid ah cayaaraha iyo waxyaabo kale oo badan oo codsigu oggol yahay
Abku wuxuu leeyahay xayeysiis aan dhib lahayn, laakiin waa lagaa saari karaa qiimo dhan 5,99 euro, oo ah qaddar lagu taageerayo soo-saaraha ka dambeeya codsigan oo noqday mid caan ah. Barnaamijkan ayaa la soo degsaday in ka badan 500.000 oo jeer tan iyo markii la bilaabay wax ka yar sanad ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu isticmaalo taleefankaaga casriga ah xakamaynta Nintendo Switch
Seeftaada ama faashad ku xir si aad uga takhalusto cadawgaaga 'slice Knight'